Al-shabaab oo weeraray hoteel ku yaala Kenya iyo Madaxweyne Xaaf oo ka badbaaday. – Kalfadhi
Al-shabaab oo weeraray hoteel ku yaala Kenya iyo Madaxweyne Xaaf oo ka badbaaday.
MUQDISHO, 15 JAN 2019 (KALFADHI)-Weerar ku bilaawday laba Qarax oo loo adeegsaday Gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa ayaa galabta ka dhacay Hotel-ka DusitD2 ee ku yaala Xaafadda Westlands magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya waxaana kadib la maqlay rasaas xoog leh oo ka dhacaysay gudaha hoteelka.
Hoteelka la wareeray ayaa la sheegay iney ku yaalaan dhismiyaal ka kooban Xafiisyo, goobo lagu nasto, qolal jiif iyo goobo ganacsi waana mid ka mid ah hoteelada ugu mashquulka badan Kenya.
Madaxweynaha maamulka Galmdudug Axmed Ducaale Geelle oo ka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay iney maqleyn dhawaaqa Qaraxyo culus, kadibna ay is qabsatay uuro iyo rasaas. Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka islamarkaana uu halkaasi shir kula lahaa shirkad uu kala hadlaya horumarinta Galmudug.
Dagaalamayaasha Al-shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkii lagu qaaday hoteelka DusitD2 ee dalka Kenya. Af-hayeen u hadlay Al-shabaab ayaa sheegay in koox gaar ah oo ka tirsan Al-shabaab ay weerarkaasi fuliyeen wixii faah faahin ahna ay dib ka bixin doonaan.
Booliiska Kenya ayaa xaqiijiyay weerarka lagu qaaday hoteelka DusitD2 ee Kenya. Booliiska ayaa qoraal ay soo dhigeyn Twitter-ka waxay ku sheegeyn in la xiray dhamaan wadooyinka ku dhaw aagga uu weerarka dhacay. Sidoo kale Af-hayeen u hadlay Booliiska Kenya ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo afjari doono howlgalka ay wadaan Ciidamada amaanka ee Kenya.
Al-shabaab ayaa dhowr jeer sidaan oo kale waxay weeraro ku qaadeyn goobo muhiim ah oo ku yaala dalka Kenya kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac badan.
Bishii Sebteembar ee Sanadkii 2013 ayaa Al-Shaabab waxay weerar ku galeyn Westgate Mall oo ah goob laga dukaameysto oo ku taal Nairobi. Sidoo kale Al-shabaab ayaa 150 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen Jaamacad ku taal magalaada Garissa ee woqooyi bari Kenya, weerarkaas ayaa laga joogaa muddo 2 sano ah.
Xildhibaan Fiqi : Madaxweynaha Khudbadiisii xalay waxa uu ku durayay Reyasl Wasaare Kheyrre
Madaxweyne Lafta-gareen oo maanta lagu caleema saarayo Baydhabo